Intshukumo yemozulu yokuxhasa uJa Ja, hayi uBlah Blah, Isizukulwana esitsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Awards » Intshukumo yemozulu yokuxhasa uJa Ja, hayi uBlah Blah, Isizukulwana esitsha
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • I-ICTP • iindaba • abantu • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abasebenzi beZiko lokuHamba ngokuNoxanduva (CREST) ​​kunye neBhodi yaBalawuli baqala imbasa yonyaka yeMartha Honey Legacy ngo-2019 njengendlela yokwamkela umntu kwishishini lokhenketho lwehlabathi elenza umahluko omkhulu ekutyhaleni imvulophu kuhambo olunoxanduva.
Eli wonga linika imbeko kubunkokheli bezokhenketho oluhlala ixesha elide kuMartha Honey, onikwa imbeko kuye.
UMartha Honey ngu-Co-Founder kunye noMlawuli we-Emeritus weziko loKhenketho oluPhendulayo (CREST), e-Washington, DC.
Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, ubhale kwaye wafundisa ngokubanzi kukhenketho lwezendalo, ifuthe lokhenketho, uhambo ngenqanawa kunye nokhenketho lweeholide, ukutshintsha kwemozulu kunye nemiba yokuqinisekiswa.
Kulo nyaka, Mnu.Geoffrey Lipman, uMququzeleli weSUNx - Strong Universal Network, kunye noMongameli Amaqabane eMozulu yaMazwe ngaMazwe noKhenketho (ICTP), wabhengezwa njengowamkela i-2021 ye-2021 Martha Honey Legacy Award kwi-CREST.
Oku kulandelayo ngamazwi kaMnu. Lipman ngokufumana eli bhaso lixabisekileyo:
Ndifuna ukubulela i-CREST ngeli bhaso libalaseleyo kwaye ndithathe ingqalelo yobunkokeli kwezokhenketho obucinga ixesha elide obucingwe nguMartha Honey, onikwe imbeko kuye. Ndonwabile ukuba sithengise iingcinga ngexesha lempucuko yasekuqaleni kweminyaka yee-1990 kwaye hayi kwindawo ethe tyaba, inzondo yosulelo, ilizwe likaTrumpian lanamhlanje. Isivumele ukuba size kwimiba efanayo kwiimbono ezahlukeneyo, ngokuzonwabisa nangokubekekileyo.
Ndiyayamkela imbasa, hayi eyam kakhulu, kodwa njengesiqinisekiso sokuphefumlelwa endakufumana ngelo xesha kumhlobo wam kunye nomcebisi wam iminyaka engama-25, ongasekhoyo uMaurice Strong - uzinzo kunye nomzabalazo wemozulu kwisiqingatha senkulungwane esadlulayo.
Kwaye ndiyamangaliswa yinto ayenzileyo kwinqanaba lehlabathi.
Kwangulo Maurice Strong owayeququzelela iNgqungquthela yoMhlaba ka-1972 kunye ne-Rio Rio Summit yowe-1992- kunye neeNtloko zoMbuso ezili-124. Ngubani ophethe ukuzalwa kwe-UNEP, i-IPCC, i-UNFCCC, uMgaqo-nkqubo woMhlaba, kunye nomnikelo weebhiliyoni zeedola zikaTed Turner kwi-UN Foundation. Kwaye kwaxoxwa ukuba yayineminwe kwi-MDGs, ii-SDGs, kunye neParis Climate Accord.
Njengombono wakhe ubhakwe kwi-DNA ye-SUNx Malta, ilifa kuye kwindawo yoKhenketho noKhenketho, i-NGO esekwe e-EU, ibambisene norhulumente waseMalta ukuqhubela phambili Imozulu yobuhlobo yokuHamba.
Umyalezo wam namhlanje, osuka ku SUNx Malta, Kunye nombulelo wam wangempela kwi-CREST nge-Award, inamanqaku amathathu.
Inye, Ingxaki yemozulu ikhona - kufuneka ijolise ikakhulu kuthi. Kwaye iyayidinga ngoku. Lo ngunyaka ushushu kwimemori yakutshanje, eneempembelelo ezimbi ezonyuka kwihlabathi liphela. Umendo wethu wangoku wama-2030 wokukhutshwa kukonyuka nge-16% endaweni yokuhla kweepesenti ezingama-50 ezifunekayo ukuze uhlale kumkhondo we-1.5-degree.
Okwesibini, Isibhengezo sezoKhenketho iGlasgow linyathelo eliya kwicala elilungileyo, kodwa kufuneka siqhubele phambili, ngokukhawuleza. Sifuna i-DASH-2-Zero, iNet Zero Carbon 2030 kunokuba ibe ngu-2050 kwaye ngo-2050 (amashumi amathathu eminyaka kude) asifuni GHG. IDASH imele ukuBhengeza: Umthetho: INkxaso kunye neThemba.
Okwesithathu, elona themba lethu lolutsha, oya kuthi njengoko uGreta Thunberg esitsho kuya kufuneka acoce ubumdaka bethu. Abantu abatsha banamhlanje nguJa Ja-Ewe sinokuvelisa. Ayisiyo blah blah- njengoko iThunberg ibhekisa kweyethu. Bazakuthatha amanyathelo anzima adingekayo ukuze baphile neCrisis Crisis- kuba ayizukuhamba.
Kwaye kufuneka sibanike iNkxaso kunye neThemba ebafaneleyo.
Njengoko ii-Innuits zisitsho, "Asizukuwudla ilifa umhlaba koobawo, siwuboleka kubantwana bethu." Enkosi
Malunga neSUNx Malta
I-SUNx ngumbutho osekwe e-EU, ongenzi nzuzo, osekwe njengelifa ku-Maurice Strong, imeko-bume yezulu kunye nozinzo, kwaye ubambisene norhulumente waseMalta.
I-SUNx Malta yenze i "Green & Clean, Climate Friendly Travel System" eyilelwe ukunceda iinkampani zezoKhenketho nezoKhenketho kunye noluntu ukuba luguqulele kuqoqosho lwemozulu entsha. Le nkqubo isekwe ekunciphiseni ikhabhoni, ukuhlangabezana neenjongo zoPhuculo oluZinzileyo, kunye nokuthelekisa indlela eParis 1.5C. Yintshukumo kunye nokugxila kwezemfundo-ukuxhasa iinkampani zanamhlanje kunye noluntu ekufezekiseni iinjongo zabo zemozulu kunye nokukhuthaza iinkokheli ezincinci ngomso ukuba zilungiselele umvuzo wokuzonwabisa kumacandelo ohambo. Umququzeleli kunye noMongameli nguNjingalwazi Geoffrey Lipman.
SUNx IMalta ifuna iDASH-2-Zero yecandelo lezohambo noKhenketho olunefuthe. Ukutyhala amanyathelo ngokukhawuleza. Ewe kwiNet Zero Carbon, kodwa ngowama-2030 kunye nokuzibophelela KWAKUKHO iigesi zeGreenhouse ngowama-2050. IDASH ithetha ukuBhengeza kunye noMthetho ngeNkxaso kunye neThemba. ILANGAx IMalta iqeqesha iiNtshatsheli zeMozulu eziQinisekileyo ze-100,000 kuwo onke amazwe ase-UN ngowama-2030. Ngokudibeneyo neenjongo zethu zoPhuhliso oluZinzileyo (SDG-17), sinikezela nge-UNFCCC edibeneyo Ubhaliso lokuKhawulezisa amabhongo kunye nenkxaso yeenkampani ezinobuhlobo bemozulu noluntu.
Ngolwazi oluthe vetshe nceda uqhagamshelane no-Olly Wheatcroft [imeyile ikhuselwe]
Novemba 21, 2021 kwi-23: 31
Imozulu yeHablan de Cambio y la Elite Luciferinas nos gasean todos los día con el “Proyecto HAARP” de ibe ngama-20 eeminyaka, kunye ne-nuestros océanos estan llenos de los barriles de los barriles de residuos de Uranio ..!¡